FADEEXAD: Ander Herrera & Kabtanka Atletico Madrid ee Gabi Oo Wajahaya LABA Sano Oo Xabsi Ah Iyo LIX Sano Oo Kubbada Cagta Laga Mamnuucayo. – GOOL24.NET
FADEEXAD: Ander Herrera & Kabtanka Atletico Madrid ee Gabi Oo Wajahaya LABA Sano Oo Xabsi Ah Iyo LIX Sano Oo Kubbada Cagta Laga Mamnuucayo.
Kiiska fadeexadii ugu waynayd kubbada cagta Spain ayaa dhamaad ah waxaana hadda la sii ogyahay ciqaabta ay mutaysan karaan ciyaartoy iyo shaqsiyaad kale oo hore loogu soo eedeeyay in ay ku lug lahaayeen in kulamo horyaalka La liga ah la sii go’aamiyay sanadkii 2011 kii. Xidiga khadka dhexe ee kooxda Manchester United ee Andre Herrera iyo kabtanka Atletico Madrid ee Gabi ayaa ka mid ah eedaysanayaasha fadeexaadan.
Waxay ahayd sanadkii 2011 kii markii ay kooxaha Real Zaragoza iyo Levante kulan wada ciyaareen kaas oo go’aaminayay in kooxda Real Zaragoza ay u dhacdo heerka labaad iyo in ay baaqi ku sii ahaado horyaalka La liga laakiin waxaa ciyaartoydii waqtigaas ee Zaragoza oo uu Herrrera ku jiro lagu eedeeyay in ay ciyaartoyda Levante lacag siiyeen si ay 2-1 guul ugu gaadhaan.
Guushaasi waxay keentay in Real Zaragoza ay horyaalka La Liga baaqi ku sii ahaatay halka kooxda Deportivo oo ay tartamayeen ay heerka labaad u dhacday, laakiin baadhitaan waqti dheer qaatay, waxaa ugu danbayn la soo gaadhay xiligii kiiskan la soo xidhi lahaa ee maxkamadiisa dib loo furi lahaa.
Maxkamada gobolka ayaa garsooraha Isabel Rodriguez ku qasabtay in uu dib u furo kiiskan fadeexada kubbada cagta Spain kaas oo muddo laba sano ku dhaw dib loo dhigay si baadhitaan dheeraad ah loo sameeyo, waxaana hadda la go’aamin doonaa kiiskan iyada oo la soo ururiyay cadaymihii la heli karayay oo dhan.
Markii ugu horaysay maxkamada dallka Spain waxaa la soo taagayaan ciyaartoy magac wayn ku leh kubbada cagta kuwaas oo dhexda kaga jira fadeexaad kulamo la sii go’amiyay iyada oo la adeegsanayo lacag musuq maasuq ah, waxaana magacyada ciyaartoydan ugu waa wayn kabtanka Atletico Madrid ee Gabi, Ander Herrera oo Man United ka tirsan iyo waliba Vicente Iborra oo kooxda Liecester City ka tirsan.
Waxaa jira 9 ciyaartoy oo danbigan qayb ka ah isla markaana lagu hayo cadaymo muujinaya in ay ku lug lahaayeen in ciyaartoyda kooxda Levante lacag la siiyay kulankii sanadkii 2011 kii si Real Zaragoza ay guul ugu ogolaadeen, waxayna ciyaartoydaasi kala yihiin: Ander Herrera, Leonardo Ponzio, Toni Doblas, Maurizio Lanzaro, Paulo Da Silva, Braulio Nobrega, Jorge Lopez , Carlos Diogo iyo Vicente Iborra.
Waxa kale oo eedaysanayaasha fadeexaad ka mid ah tababarihii iyo agaasimihii ciyaaraha Zaragoza ee Javier Aguirre iyo Antonio Prieto sida ay u kala horeeyaan. Waxayna shaqsiyaadka liiskan ku jiraa bixiyeen lacag dhan 965,000 euros oo la siiyay ciyaartoydii kooxda Levante.
Si kastaba ha ahaatee, wargayska Marca ayaa sii shaaciyay in heer ilaaliyaasha baadhaya fadeexada kulankani ay doonayaan in shaqsiyaadkan lagu rido xukuno adag iyada oo ciyaartoydan lagu xukumi doono min laba sano oo xabsi ah iyo lix sano oo kubbada cagta laga mamnuucayo waxaana hadda la sugi doonaa go’aanka maxkamada iyo sida uu u socon doono.